Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo gaarey degmada Xudur iyo warar sheegaya in uu Dowladda isu dhiibay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo gaarey degmada Xudur iyo warar sheegaya in uu Dowladda isu dhiibay
Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo gaarey degmada Xudur iyo warar sheegaya in uu Dowladda isu dhiibay
August 13, 2017 - By: HORSEED STAFF
Mukhtaar Roobow Cali oo loo yaqaan Abuu Mansuur, kamid ahaa asaasayaashii Xarakada al-Shabaab, mar noqdey afhayeenka ururkaas, marna soo noqdey ku xigeenka Amiirka al-Shabaab ayaa maanta gaarey magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed.
Maalmihii u danbeeyey waxaa ka socdey gobolka Bakool dagaal u dhexeeyey Malayshiyaadka al-Shabaab iyo kuwo taageersan Abu Mansuur, dagaaladan ayaa warka keliya ee laga helaayey ahaa mid hal dhinac ah kana imaanayey maamulka Koonfur Galbeed.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa u gurmadey Mukhtaar Roobow oo uu ku lahaa abaal kadib makii al-Shabaab qabsadeen Baydhabo sanadkii 2009, markaas oo uu sii daayey madax ka tirsan Dowladda Federaalka oo ka soo jeeda beelaha Digil iyo Mirifle oo Baydhabo dagaalku ku qabsadey.
Wararka u danbeeyey ayaa sheegaya in diyaarad khaas ah Dowladda Soomaaliya u dirtey si Abu Masnuur looga soo qaado gobolka Bakool. Wararku waxay sheegayaan in Madaxweynaha kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan uu hadda ku sugan yahay Muqdisho, dowladdana ka dhaadhicnaayo in la cafiyo Abu Mansuur.
Mukhtaar Roobow Abu Mansuur iyo ururka al-Shabaab ayaa khilaaf dhex marey kadib markii hoggaamiyihii hore ee al-Shabaab Axmed Cabdi Godane uu ka takhalusay Ibraahim Afqaanitaan iyo Macalin Burhaan oo kamid ahaa hoggaamiyaasha Xarakada iyo qaar kale oo badan oo kamid ahaa kuwa al-Shabaab u yaqaanaan Mhuaajiriin. Abuu Mansuur oo taageero ku dhex lahaa Malayshiyaadka beshiisa ayaa muddo dheer ku sugnaa gobolka Bakool. Bishii hore ayaa Maraykanku ku dhawaaqdey in ay liiska dadka madaxooda lacagta lagu raadinaayo laga saarey Abu Mansuur, taas oo aan la garaneyn dan ay ka lahaayeen, waxaana arrintaasi al-Shabaab ku xanbaaretey in ay Wadaadka mayalka adag ee horey uga tirsanaa ay ku qaadaan dagaalo culus oo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashey.
Abu Masnuur ayaa kamid ahaa hjoggaamiyaasha ciidamada badan u keenay ururka al-Shabaab, waxaana si weyn loogu xusuustaa dagaaladii lagu riiqdey ee Muqdisho ka dhacay 2010-2011.
Biyo la’aan laga soo sheegayo Deegaano ka tirsan Gobolka Gardafuu-Dhegayso
July 15, 2018 By Abdirahman Abdi
Gudoomiyaha Degmada Iskushuban oo ka hadlay baahiyaha degmada-Dhegayso
Dekad macmal ah oo laga dhagax dhigay gobolka Shabeelada Hoose-Dhegayso
July 15, 2018 By Mohamed Jeenyo
Madaxweynaha Soomaaliya oo si weyn loogu soo dhaweeyey Brussels-Sawiro
Shirka dib u eegista iyo horumarinta waxbarashada oo lagu qabtay Garowe